Magdhawga iyo Magdhawga Dhibbanayaasha
Barnaamijka Magdhawga Dhibbanayaasha wuxuu siiyaa gargaar lacageed xadidan dhibbanayaasha dambiyada. Khasaaraha maaliyadeed waa inuu noqdaa natiijada tooska ah ee dambiga mana lagu soo celin karo ilo kale, sida caymiska.
Barnaamijka Caddaaladda ee barbar socda ee BCJC wuxuu ku siin karaa macluumaad dheeri ah isla markaana ka caawin karaa dhibbanayaasha dembiga buuxinta dalabka Magdhawga Dhibbanayaasha. Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan barnaamijka waxaa laga heli karaa Xarunta Adeegyada Dhibbanayaasha Dembiyada ee Vermont ' websaydhka , Codsiga waa la soo dejisan karaa halkan.
Celinta waxay gacan ka geysaneysaa wax ka qabashada dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dhibbanayaasha dambiyada. Unugga Dib-u- Celintu wuxuu dhaqan-geliyaa oo ururiyaa dib-u-celinta maxkamaddu amartay isla markaana hagtaa lacagaha ay dembiilayaashu siiyaan dhibbanayaasha.
Barnaamijka Caawinta Dhibbanayaasha Vermont
Barnaamijka Caawinta Dhibbanayaasha Vermont (VAP) wuxuu awood siiyaa dhibbanayaasha dambiyada iyadoo ka caawineysa inay ka helaan nidaamka cadaaladda dambiyada iyadoo loo marayo damqasho, taageero, macluumaad, ilaha, iyo u gudbinta la-hawlgalayaasha bulshada. VAP waxay u adeegtaa degmo kasta oo ku taal Vermont iyadoo leh labaatan iyo toddobo Garyaqaannada Gobolka ee u doodayaasha dhibbanayaasha oo u heellan u adeegidda baahiyaha dhibbanayaasha dembiga.
Buugga macluumaadka ee Adeegyada Dhibbanayaasha Vermont
The Victim Services Vermont Resource Directory , ururisey ah Xarunta Dhibbanayaasha Dembiyada ee Vermont waa hage wanaagsan oo loogu talagalay ilo badan oo gacan ka geysta la shaqeynta dhibbanayaasha dembiga. Tusaha waxaa kujira dulmar guud ee xuquuqda dhibanayaasha, sharaxaad ku saabsan nidaamka cadaalada dembiyada, liis gareynta qawaaniinta la xiriira dhibanayaasha dambiga, macluumaadka ku saabsan maxkamadaha VT, istaraatiijiyadaha ka hortagga dambiyada, iyo macluumaadka xiriirka ee gobolka, khayraadka gobolka iyo caawi dhibbanayaasha. Nuqul adag oo ah Diiwaanka Kheyraadka ee Adeegyada Dhibbanaha Vermont, la xiriir Xarunta Adeegyada Dhibbanaha Dembiyada ee Vermont ee 103 S. Main Street, Waterbury, VT 05671-2001; taleefan (802) 241-1250, 1-800-750-1213 (VT kaliya), ama 1-800-845-4874 TTY.
Kheyraadka Bulshada ee Dhibbanayaasha / badbaadayaasha
Adeegyada Ilaalinta Dadka Waaweyn - Unug ka tirsan dawladda gobolka Vermont oo mas'uul ka ah baaritaanka eedeymaha xadgudubka, dayacaadda iyo dhiig-miirashada dadka waaweyn ee nugul
Xuquuqda Naafada Vermont - Waa hay'ad gobolka oo dhan u heellan horumarinta xuquuqda dadka naafada ah iyo arrimaha caafimaadka maskaxda. Doorarka kale, waxay ku taageeraan xuquuqda aadanaha iyo tan madaniga ah iyagoo baaraya cabashooyinka xadgudubka iyo dayaca (faraxumeyn jireed ama mid galmo, aflagaado iyo aflagaado, xakameyn iyo gooni ahaansho, daaweyn qasab ah, iyo kadeedis.)
Shaqada HOPE - Loogu talagalay badbaadayaasha rabshadaha galmada ee Degmada Chittenden
Xarunta Qaranka ee Dhibbanayaasha Dembiyada - Ururkan qaran wuxuu leeyahay kheyraad fara badan oo loogu talagalay dhibbanayaasha dembiga iyo kuwa la shaqeeya.
Tallaabooyinka lagu joojinayo Rabshadaha Qoyska - Loogu talagalay dadka ka badbaaday rabshadaha lamaanaha ee degmada Chittenden
Shabakada Vermont ee kahortaga Rabshadaha Qoyska iyo Galmada - Taageerida dhibanayaasha rabshada galmada iyo qoyska guud ahaan Vermont, shabakadan “dalladda” waxay ku siin kartaa tixraac ururkaaga taageerada deegaanka haddii aad ku nooshahay meel ka baxsan Gobolka Chittenden.
SafeSpace ee Xarunta Kibirka ee VT - Badbaadada Goobtu waa barnaamij loogu talo galay joojinta rabshadaha ka dhanka ah deriskeenna LGBTQ * iyo taageeridda dhibbanayaasha LGBTQ * ee dembigu saameeyey. Waa qayb ka mid ah Xarunta Kibirka ee VT.
Vermont 211 - Hawl wade toos ah (oo la heli karo 24/7) ama websaydhka ayaa kaa caawin kara macluumaadka ku saabsan hay'adaha iyo ilaha kala duwan ee ku yaal Vermont kuwaas oo diyaar u ah inay ka caawiyaan ku dhowaad xaalad kasta.
U-doodayaasha Dhibanaha ee Garyaqaanka Gobolka Vermont - Haddii dembiilaha la qabto oo la maxkamadeeyo, U-doodaha Dhibbanaha ee Xafiiska Qareenka Gobolka ayaa diyaar u ah inuu ka caawiyo dhibbanayaashu inay maraan nidaamka sharciga dambiyada iyadoo kiisku u marayo nidaamka maxkamadda.
Nidaamka Ogeysiinta otomaatiga ah ee Vermont - Nidaamkan otomaatigga ah wuxuu ogeysiiyaa dadka iska diiwaangeliya taleefan ama emayl macluumaad casriyeysan oo ku saabsan eedeysanayaasha iyo dembiilayaasha la xukumay. Tan waxaa ku jira macluumaad ku saabsan haddii dambiile dambi ku jiro ama ay kormeerayaan Waaxda Asluubtu inta uu ku dhex nool yahay bulshada.
Sida ku cad Cinwaanka 13aad ee Xeerarka Vermont:
U-doodaha dhibbanaha waa inuu had iyo jeer weydiiyaa dhibbanaha haddii ay jiraan wax walaac ah oo iyaga ku saabsan
badbaadada. U-doodaha wuxuu ilaalin doonaa sirta dhibbanaha wuuna taageeri doonaa markay dhammaadaan
Dhibanaha waxaa laga ilaalin doonaa inta lagu guda jiro howsha cabsi gelin ama hanjabaad. The
u doodaha dhibbanaha wuxuu fiiro gaar ah u yeelanayaa cabsi kasta oo dhibbanuhu qabo, dareemo ama dhab ah. Dhibanaha
u-doodaha waa inuu ka jawaabaa wixii iyo dhammaan arrimaha nabadgelyada ee soo baxa inta hawshu socoto.
Dhibbanuhu wuxuu xaq u leeyahay macluumaad gaar ah oo la xiriira kiiska. Tan waxaa ka mid ah
waqtiga iyo taariikhaha shirarka, horumarka kaqeybgalaha iyo inuu kaqeybgalehu dhameystiray
guul ama maya. Dhibbanuhu wuxuu sidoo kale codsan karaa macluumaad gaar ah, oo xaaladdu noqoto
masuuliyada u doodaha si uu u ogaado. Dhibbanuhu sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay in la taageero
u diyaargarowga ka-qaybgal kasta oo geeddi-socodka ah iyo xaqa loo leeyahay in la bixiyo oggolaansho ama aan laga hadlin
Dhibbanaha marwalba wuxuu leeyahay ikhtiyaar inta hawshu socoto oo dhan. Waxaa la siiyaa tiro ka mid ah
ikhtiyaariyada ku saabsan sida ay u doonayaan inay uga qaybgalaan iyo in kale iyo sida ay u doonayaan inay horay ugu socdaan
Dhibbanayaasha waxaa la siiyaa meel ay kula wadaagaan sheekadooda sida dembigu u saameeyay noloshooda,
xor ka ah xukunka ama dhaleeceynta.
Dhibbanuhu wuxuu kahelaa u doodaha dhibanaha ansaxinta dareenkooda ku aadan dembiga
iyo xubnaha kale ee guddiga.
7. Soocelin / Magdhaw
Dhibbanuhu wuxuu xaq u leeyahay in loo magdhabo culeys dhaqaale oo kasta oo fal dambiyeedka uu ku keenay.
Warbixin ku saabsan u adeegida dhibbanayaasha dambiyada iyadoo loo marayo cadaaladda dib u soo celinta: Kheyraadka loogu talagalay hoggaamiyeyaasha iyo tababbarka Ururka Cadaaladda Dib-u-Celinta ee Alberta.
Sidoo kale waxbadan baro adoo naftaada waxbaraya .